Roadzọ nke Ọdịnihu nke Ahịa | Martech Zone
Iji ya. Nke ahụ bụ ihe m chere ozugbo m hụrụ onyinyo dị n'okpuru site na akụkọ MediaPlant nke Microsoft kwadoro, Dollar, Bits, na Atoms: Roadzọ nke Ọdịnihu nke Ahịa. Ọ bụ nlezianya anya nke ọma na etu esi arụ ọrụ teknụzụ iji wee nwee ike ịre ahịa azụmaahịa. Otu eserese pụtara dị ka anyị na-enyere ụlọ ọrụ aka ịzụlite usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị ha ka m wee tinye ya n'okpuru.
Ire ahia di na onodu mgbanwe, nke mgbanwe na teknuzu, onu ogugu mmadu na obodo. Maapụ a na-ahụ ọnọdụ ndị ndị isi ụlọ ọrụ na ndị ọkachamara gosipụtara, na-egosi mmekọrịta dị n'etiti teknụzụ na usoro ahịa, yana ebe ụlọ ọrụ ahụ na-aga.
Achọghị m ịkekọrịta oke - gbaa mbọ gụchaa ihe niile nchịkọta akụkọ na MediaPlant. Mgbasa Ozi bụ ụlọ ọrụ nkwukọrịta ọkachamara na ahịa B2B, atụmatụ, na mmepe teknụzụ. Onye edemede Rob Salkowitz bụ onye ode akwụkwọ amaara ama n’ụwa na onye ọkachamara n’achụmnta ego, ihe ọhụrụ, yana nsogbu na teknụzụ na azụmaahịa. Hụ na ị gụrụ akụkọ a na ndị ọzọ na MediaPlant.
Anyị emepela usoro anyị kpọrọ Ikike ọdịnaya na ndị ahịa anyị nke ahụ bụ usoro nke na-eji data oge, data ntanetị, na usoro ndị ọzọ iji zụlite ma chọpụta ọdịiche na ọdịnaya azụmaahịa yana ịkọ mkpa maka ọdịnaya ọhụrụ. Ọdịnaya marketing bụkarị mmezu nke usoro usoro nke ụlọ ọrụ ngwaahịa, ngwaahịa, yana ọdịnaya metụtara ọrụ dị mkpa maka ahịa. Njikwa bụ ikike itolite ma mee ka iru gị, ewu ewu na mmata gị n'ọhịa mee ngwangwa. (Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma).
Ndị ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ na ọganihu ndị a mana teknụzụ dị. Wlọ nkwakọba data dị ka ihe ngwọta na ụlọ ahịa na-enye nnukwu data data na-eweta mpempe data ọ bụla dị mkpa maka njem ndị ahịa na-abanye n'aka ndị na-ere ahịa. Nke a na-enye ohere dị ịtụnanya maka nkewa na nkeonwe - ịdị nsọ nke ahịa: ịtụkwasị ozi n'oge kwesịrị ekwesị na ebe kwesịrị ekwesị nye onye ahịa gị ma ọ bụ atụmanya na-enweghị iwe.
Tags: 360 ogo crmndị mmadụusoro mgbasa ozi niileMgbasa ozi anamorphicngwa-m-ọ bụghịngwa ebe ọ bụlannukwu databrandejikọrọ ahịaoririikike ọdịnayacontent MarketingonoduCRMnhazinjem ndị ahịaazụmahịa d2dahụmahụọkachamaranka na inan'ọdịnihuọdịnihu nke ahịagamificationgeo-elekọta mmadụ na netwọknkwụsịinverted ọchụchọmmekọrịta kineticnyere ọnọdụ-maaranchịkọta dabeere na ọnọdụọdịnihu ahịaụzọ ahịaVidio Ahịamgbasa ozinyocha ọtụtụ ihuenyoụdị-emepe emepeahaziri ahazirinchịkọta amụmandozindị nkwusaozugboụzọ ntanetịzuru salkowitzoghere smartnchịkọta mmadụelekọta mmadụ mediaịkọ akụkọ
Fantastic post !!! Daalụ maka ịkekọrịta Doug !!
Feb 25, 2016 n’elekere 10:28 nke abali
bụ ihe enyemaka na-enye aka Doug!